Maitiro Ekumisikidza Bhizinesi Rako Pasina Kurasika Traffic | Martech Zone
Chishanu, December 16, 2016 Chishanu, December 16, 2016 Natasa Djukanovic
Haasi makambani mazhinji ane zvese zvakafunga panguva iyo pavanotanga yavo webhusaiti. Pane kupokana, vangangoita 50% emabhizinesi madiki havana kana webhusaiti, ndoda mufananidzo wechiratidzo wavanoda kugadzira. Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe haufanire kuti uve nazvo zvese kuti zvifungidzirwe kubva pabheti. Paunenge uchangotanga, chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti - kutanga. Iwe unogara uine nguva yekuita shanduko uye rebrand. SeCMO yeDomain.ME, inoshanda yemunhu .ME mazita emazita, ini ndinopupurira madiki uye makuru ekumisikidza mapurojekiti zuva nezuva.
Zvinokonzera mapurojekiti aya zvinosiyana. Vamwe vanhu vanongomanikidzwa kuchinjisa zita rezita ravo mukubatana, kana inogona kunge iine chekuita nemufananidzo wechizvino, uye mamwe makambani anongoda kuyedza!
Zvisinei kuti chii chiri chikonzero, chinhu chimwe ndechechokwadi - iwe unoda kuchengetedza bhizinesi rako richimhanya kuburikidza nekumiswazve. Asi iwe ungaita sei kuti uchengete vatengi vako venguva dzose vachiuya kuburikidza nemusuwo iwe pawakachinja chikwangwani, zita, ruvara, uye zvese zvavanowana zvavanoziva?
Iyo kiyi yekuita kuti vatengi vako ive chikamu chekuzvarwa kwako zvakare. Kubata uye kugara uchitaura kubva kuvateereri vako ndicho chinhu chakakosha kuita shanduko inobudirira. Zvakanakisa, vako vakavimbika kupfuura vese vatsigiri vanoshanda seboka rekuyedza kutarisa kwako kutsva. Teerera kwavari, ita sarudzo kana iwe uchidavira kuti unogona kuwana mhinduro inobatsira, uye uvabvumire kuti vave chikamu chebhizimisi rako. Vanhu vanokoshesa kuve nechekuita uye ivo vanonyanya kuita mukana wekukurudzira uye kutsigira yako brand kana ivo vachinzwa sekunge vakubatsira iwe kuvaka pakutanga.
Ko Zvakadii NeWebhusaiti Yangu?
Kuchengeta traffic yako uye yako yakaoma-yawakawana masosi mune iyo nzira yekumisikidza uye kushandura rako rezita zita zvichave zvakaoma. Zvigadzirire iwe pachokwadi chekuti iwe zvechokwadi ucharasikirwa nevamwe vashanyi (uye kumwe kutengesa zvakare) nekuda kweichi chiitiko. Nekudaro, mhedzisiro mhedzisiro inogona kuita kuti zvese zvikoshe uye shanduko inofungidzirwa kunze inogona kudzora kukuvara. Iyi mitemo mishanu ichaita kuti utange:
Ziva ako traffic traffic - Iwe unozoda kuongororwa kwakadzama kwese kunobva traffic yako yazvino (ruzivo urwu rwunowanikwa zviri nyore kuburikidza neGoogle Analytics Zvishandiso). Nyatsoteerera kune makwara ari kutyaira huwandu hwakanyanya hwetraffic - uye nyatso vimbisa kuti vateereri vavo vanoziviswa nezve kumiswazve uye shanduko yedomain. Tora nguva yekuvandudza zano rinotarisa idzi chaidzo nzira uye uvazivise nezve shanduko nekukurumidza uye zvinobudirira.
Chengeta vashanyi pane iro peji - Wakambonzwa nezve 301 redirects? Aya anodzoreredza vashanyi vesaiti kune yakasarudzika URL pane iyo yavakatanga kupinda mubrowser yavo kana kudzvanya kubva pane runyorwa rwezvitsva zvekutsvaga. Izvi zvinobatsira kuve nechokwadi chekuti vatengi vako avo pakutanga vasingazive nezve rako rekumisikidza uye domain shanduko vanoendeswa kune yako nyowani saiti. Mushure mekugadzira backlink mushumo uye kumisikidza kuti ndeapi masosi ari kutaura nezve webhusaiti yako, iwe uchazoda kuve nechokwadi chekuti ese ma URL anonongedzera kune yako nyowani kero yewebhu. Iwe ungangoda kuhaya nyanzvi kune ino nhanho.
Dhonza plug - Mushure mekutarisa zvese zvakapetwa kaviri uye vateereri vako vaziviswa zvakanaka nezve shanduko, danho rinotevera kuvhura webhusaiti yako nyowani. Panguva ino, iwe uchazoda kuve neyako Google Analytics account uye yako Yekutsvaga Console yakabatana kune yako nyowani domaini. (Tarisa uone Douglas's domain change change checklist apa!) Kwete izvozvo chete, asi iwe zvakare unozofanirwa kuchengetedza iro rekare brand richinonoka mumeta meta uye mameseji emakopi efa rako nyowani kuitira kuti injini dzekutsvaga dzikwanise kuona uye kuratidza shanduko yacho nemazvo.
Gadziridza zvako zvinongedzo & zvinyorwa - Ese emabhizinesi madhairekitori ane yako saiti anodikanwa kuti avandudzwe - uye kana iwe wakaisa mari muSEO yemuno uye uine mazana ekubatanidza pane madhairekitori ebhizinesi mukati meiyo internet, ichave inotora nguva. Backlinks, senge iwo emabhizinesi madhairekitori, zviratidzi zvehukama hwako uye huvepo hwako pawebhu. Svikira kune iwo mawebhusaiti ayo akabatana newe munguva yakapfuura uye uvabvunze kuti vachinje chinongedzo chavo kune yako URL nyowani kuti urambe uchiita mushe mukutsvaga kweinjini.
Kusimudzira, kusimudzira, kusimudzira - Regedza PR, muenzi kutumira, zviziviso zveemail, PPC uye ese ako emadhijitari ekushambadzira chiteshi kuti vanhu vazive kuti uripo nemhando nyowani mufananidzo uye duraini. Iyi mari inogona kutokunda iwe pamusoro peimwe mitsva inotungamira, uye ichanyatso kubatsira injini dzekutsvaga kunongedza ruzivo rwako uye kufaira shanduko yako nemazvo. Iyo purojekiti yekumisikidza isina mushambadziro wekushambadzira ingori marara, saka tarisira kune iyo mari zvakare.
Shanduko yakajairika mubhizinesi renyika kune ese matsva uye makambani akasimbiswa. Kuziva kurarama uye kubudirira kuburikidza neshanduko kwakakosha, saka ita iyo yekuwedzera kuyedza kuratidza bhizinesi rako muchiedza chakanakisa.
Tags: shanduko yedunhudomain change checklistrebrandRebranding